आफ्नै १८ वर्षीया छोरीलाई आमाले घर भाडा मागेपछि……. – Patrika Nepal
मंग्सिर ९, २०७८ बिहिबार 18
काठमाडौं । न्युजिल्यान्डकी एक महिलाले आफ्नी १८ वर्षीया छोरीसँग भाडा लिएको लिने गरेको भिडिओ सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा सार्वजनिक भएसँगै ती महिलाले तथानाम गाली खाएकी छन् । यद्यपि, पूर्ण सत्य नजानीकनै सामाजिक सञ्जालमा आएको एउटा भिडिओ क्लिप हेरेरै गाली गर्नु असान्दर्भीक सावित भएको छ ।
केट क्लार्क नाक गरेकी ती महिला उनकी १८ वर्षीया छोरी लतिशा र पति डेजासँग न्युजिल्यान्डमा बस्छिन् । उनले केही दिनअघि एक भिडिओ टिकटकमा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । जसमा उनीहरू पेनलाई ग्लासमा हाल्ने खेल खेलिरहेका थिए ।
जसको पेन ग्लासमा पस्छ, ऊ विजेता हुने र उसले भनेको हार्नेले मान्नुपर्ने नियम थियो । र, त्यो खेलको नियममा हार्नेले घरको भाडा तिर्नुपर्ने नियम थियो । सोही भिडिओको क्लिप सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा ती महिलाप्रति तथानाम गालीको ‌ओइरो लागेको थियो ।
अत्यधिक गाली सहनु परेपछि ती महिलाले पूर्ण सत्यसहित खेल खेलिरहेको बेलाको त्यो भिडिओ खिचिएको खुलाउँदै सत्य बाहिर ल्याएकी छन् । यद्यपि, उनले त्यसअघि नै विश्वभरबाट गाली खानु परेको थियो ।
Prevयिनै हुन् बच्चालाई फ, काएर सुनका गहना सबै लैजाने ठग ! प्रहरीले यसरी स’ मात्यो (भिडियो सहित)
Nextकरोडौंको सम्पत्ति छोडेर सामान्य व्यक्तिसँग बिहे गरेकी जापानकी राजकुमारी अमेरिकामा बाटो बिर्सिएर हराइन्